खेलकुद Archives - Page2of6- खबरम्यागजिन
गान्तोक, 28 जुलाई पश्चिम जिल्ला फुटबल एकाडेमीको निम्ति पुरुष खेलाड़ीहरूका चयन प्रक्रिया राजधानीको पाल्जर स्टेडियममा आरम्भ भएको छ। हिजो पश्चिम सिक्किमका आठवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट अण्डर-14 र अण्डर-19 का निम्ति पुरुष खेलाड़ीहरू पाल्जर स्टेडियममा भेला भए। […]
विश्कप फुटबल प्रतियोगिता अन्तरगत मस्कोमा भएको फाइनल भिडन्तमा क्रोएसियालाई ४–२ गोलले पराजित गर्दै फ्रान्सले दोस्रो पटक उपाधि उचालेको छ । पहिलो हाफमा २ गोल गरेको फ्रान्सले दोस्रो हाफमा २ गोल थप्दै ४–२ को जितसहित दोस्रो […]
पीडा बोकेर मैदानमा
जारी विश्वकप फुटबल नकआउट चरणको प्रतिस्पर्धामा आइपुग्दा यसको रोमाञ्च बढ्दो छ। केही टोली अघिल्लो चरणबाटै घर फर्किएपछि तिनका समर्थक निराश छन्। प्रतियोगितामा अघि बढिरहेका टोलीका समर्थकको उत्साह चुलिँदो छ। विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका खेलाडीहरू आफ्नो टोलीलाई […]
रुसमा जारी फिफा विश्वकपको २१ औं संस्मरणको फाइलन खेल जुलाई १५ मा हुँदैछ। प्रिक्वाटरफाइलनका खेल सकियो । विश्वकपमा सहभागी ३२ राष्ट्र मध्ये समूह चरणबाटै १६ र अन्तिम १६ बाट ८ गरी २४ टोली प्रतियोगिताबाट बाहिरीसकेकेका छन् । अब […]
बनिने भयो सिक्किम फुटबल प्लेयर्स एसोसिएशन
गान्तोक, 04 जुलाई। सिक्किममा फुटबल खेलको विकास र खेलाड़ीहरूको कल्याणको निम्ति ‘सिक्किम फुटबल प्लेयर्स एसोसिएशन’ गठन गरिने भएको छ। आगामी आठ जुलाईको दिन राजधानीमा एसोसिएशन गठनबारे एउटा सभा डाकिएको छ। उक्त सभामा सिक्किमको चारै जिल्लाका […]
अब स्पेनका खेलाडी आन्द्रेस इनिएस्टालाई अन्ताराष्ट्रीय खेलमा देखिने छैन। प्रिक्वार्टरफाइनलबाट आफ्नो दल बाहिरिएपछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवनबाट सन्न्यास लिएका छन्। मिडफिल्डमा कलात्मक खेल कौशल देखाउने अनि स्ट्राइकर, सटिक पास दिन सक्ने खुबी भएका इनिस्टाको जादुमय […]
ब्राजिल भर्सेस मेक्सिको : जित कस्को ?
ठूला र पुराना दलहरू भटाभट विश्वकपबाट बाहिरिँदैछ। ब्राजिलबारे पनि आलोचकहरूको मत राम्रो छैन। अरूजस्तै ब्राजिल पनि बाहिरिन सक्ने अनीहरूको मत हो। तर ब्राजिलबारे यति सस्तो धारणा राख्नु बेकार छ। यसअघिको प्रदर्शनमा ब्राजिलले आफ्नो चतुऱ्याईं देखाइसकेको […]
ककसले पाइसकेको छ ‘गोल्डेन बुट’?
विष्णु थापा जेम्स रोड्रिगेज (कोलम्बिया) सन् २०१४ मा ब्राजिलमा सम्पन्न भएको विश्वकपको गोल्डेन बुट कोलम्बियाका जेम्स रोड्रिगेजले पाएका थिए। आफ्नो पहिलो विश्वकपमा नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका रोड्रिगेजले सर्वाधिक ६ गोल गरेका थिए। उनले समूह […]
छोरी भेट्न निजी विमानमा घर विश्वकपमा सहभागी डेनमार्कका एक खेलाडी निजी विमान चढेर आफ्नो घर पुगेका छन् । डेनमार्कका डिफेन्डर जोनास कनुडसेन भर्खरै जन्मिएकी आफ्नी छोरी भेट्न निजी विमानमा घर पुगेका हुन् । श्रीमतीले छोरी […]
रूसमा चलिरहेको फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा अर्जेन्टिनाका स्टार फुटबलर लियोनेल मेसीले गरेको सानो कामले सबैको मन जितेका छन् । जारी विश्वकपमा अर्जेन्टिनाको सुरुवात गतिलो रहेन । उसले सुरुवाती दुई खेलमा जित पनि निकाल्न सके । यी […]
रामकला खड्का, अन्नपूर्णपोष्ट फुटबल खेलाडीहरू शारीरिक रूपमा तन्दरुस्त रहने हुँदा सुन्दर देखिन्छन्। उनीहरूले कमाउने दाम र नाम पनि लोभलाग्दो हुन्छ। त्यसैले, विश्वका चर्चित मोडेल, नायिकाहरू पनि यी खेलाडीप्रति हुरुक्कै हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। फुटबल खेलाडीले दर्शकको […]
सुकेपोखरी, २१ जून। कञ्चङजङ्घा फूटबल क्लब (केएफसी) सिलगढ़ीको होस्टेल जुलाई महिनादेखि शुरु हुने भएको छ। केएफसीका कार्यकारी अध्यक्ष सुरेन प्रधानले बैठक गरेर यस्तो निर्णय लिइएको जनाएका छन्। होसटेल अफ् सिजनको कारण अहिलेसम्म बन्द थियो। प्रधानले […]
शैलेन्द्र छेत्री क्रोएशियासँग पनि अर्जेन्टिना अल्झिए मेस्सीहरूको विश्वकप यात्रा कस्तो रहला? अहिले धेरैको मनमा उठिरहेको जिज्ञासा हो यो। विश्वकपको छनौट यात्रा जस्तो विषम थियो शायद त्यस्तै होला। समूहकै दुर्बल मानिएको आइसल्यान्डसँग बराबरी खेलेपछि अहिले अर्जेन्टिना […]
‘फुटबलमा कालो र सेतो भन्ने हुँदैन’
ड्यासअगाडि रसिया विश्वकप कभर गर्न आएका दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियासामु कालो वर्णका आलिओउ सिसे प्रश्नहरूको उत्तर दिन तयार देखिन्छन् । जब फिफाका अधिकारी पत्रकार सम्मेलन सुरु भएको घोषणा गर्छन्, त्यसैवला सिसे आफ्नो घुमाउरो कपाल मिलाउन खोज्छन् […]
म्याराथन म्यान मुम्बईमा तेस्रो
गान्तोक, 19 जून। सिक्किमको म्याराथन म्यानको नामले चर्चित धावक हुन् अमर सुब्बा। अर्ध सतक वर्ष त म्याराथन नै कुदिसकेका छन्। मुम्बई युनिभर्सिटि स्टेडियम म्यारिन ड्राइभमा पनि कुदेका थिए। 24 घण्टे नन स्टप स्टेडियम रनमा 152. […]
रुसमा जारी २१औं विश्वकपअन्तर्गत समूह चरणका पहिलाे खेल अाजबाट सकिँदैछ । उपाधिका बलिया दावेदार भनिएका अधिकांश देशका निम्ति पहिलाे चरण सुखद बन्न सकेन । उपाधिको प्रमुख दाबेदार साविक विजेता जर्मनी मेसिक्कोसँग १–० ले पराजित भयो […]
किजोम, 16 जुन किजोम युथ क्लबले खेलाइरहेको अन्तर गाउँ हाते भकुण्डो (भलिबल) प्रतियोगिताको फाइनल भयो। आले भलिबल दलले गोक भलिबल दललालाई एक तीनले पराजित गऱ्यो। स्थानीय शिशु शिक्षा केन्द्रको खेल मैदानमा भएको फाइनलमा थाना प्रभारी […]
विश्वकप साइट इफेक्ट : रुसी केटीहरूले विदेशीको पेट बोकिदिने हो कि
एजेन्सी : विश्वकप फुटबलको आयोजक राष्ट्र रुसलाई यतिबेला एकल आमाको संख्या बढ्ने चिन्ताले छोएको छ । रुसका महिलाले विश्वकपको समयमा आएका विदेशी पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्नाले एकल आमाको संख्या बढ्न सक्ने चिन्ता बढेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा […]
विश्वकपमा पहिलो ह्याट्रिक : रोनाल्डो थै थैमा
रसिया विश्वकपमा पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले स्पेनविरुद्ध ह्याट्रिक गरे । खेलको ८७ औँ मिनेटमा पाएको फ्री किकबाट उत्कृष्ट गोल गर्दै रोनाल्डोले यो विश्वकपको पहिलो ह्याट्रिक गरेका हुन् । स्पेनको डी बक्स भन्दा केही मिटर बाहिरबाट हानेको फ्री […]